Metrobus မတော်တဆဖြစ်မှုမှကာကွယ်ရန်လုံခြုံသောယာဉ်မောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်မတော်တဆမှုအောင်ကာကွယ်နိုင်မလုံခြုံသောယာဉ်မောင်းများနှင့် Metrobus ပေးပို့စနစ်များစနစ်
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metrobus, တူရကီ 0
ယာဉ်မတော်တဆမှု metrobus ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံမောင်းနှင်မှုများနှင့်ပေးပို့စနစ်များစနစ်က
ယာဉ်မောင်းဆက်စပ်စမ်းသပ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကြိုတင်သတိပေး "ကို Safe ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပေးပို့စနစ်များစနစ်များ" ပေးခြင်း IETT ။ စနစ်နှင့် တွဲဖက်. နှင့်ချွတ်-သွေးဆောင်မတော်တဆမှုချိုးဖောက်မှုများတားဆီးဖို့အသုံးပြုခံရဖို့လမ်းကြောင်းကနေ Metrobus လမ်းကြောင်း။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) IETT က၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများ, တစ်ဦးသန်းခရီးသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနီးစပ်သူတည်ရှိသော Metrobus ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုပေးရန်၎င်း၏အားထုတ်မှုအရှိန်သိရသည်။ နေ့7220 နှင့်အတူတထောင်အဆတထောင်ကီလိုမီတာ Metrobus လိုင်းအကွာအဝေးနှင့်လမ်းသွားချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်သတိပေးခဲ့သည်ခံရ, အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ကားမောင်းတဲ့အခါမှာယာဉ်မောင်းနှင့်အတူအလေ့အကျင့်သို့ "ကို Safe ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပေးပို့စနစ်များစနစ်များ" ထားရန်စမ်းသပ်ဖို့မိတ်ဆက်ခဲ့။
အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်အားလုံးယာဉ်မောင်းကအရေးပေါ်ရန်, မီး, မော်တော်ယာဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ, ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံမောင်းနှင်မှုအဖြစ်အကြောင်းအရာများအပေါ် IMM ပေးခြင်းလေ့ကျင့်ရေး, အ Metrobus လိုင်းအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းတားဆီးမတော်တဆမှုလည်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုကားမောင်းယူနည်းပညာကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်။ ဒါဟာစမ်းသပ်ခြင်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်၌ရှိ၏အသစ်တစ်ခုကို system ပေါ်တွင်အလုပ်အရှိန်အဟုန်မြှင်အစောပိုင်းသတိပေးယာဉ်မောင်းများ၏အန္တရာယ်နိယာမ IMM ဆန့်ကျင်သတိပေးလိုက်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မှလုံခြုံခရီးသွားပေးရန်နှင့်မကြာမီကို Safe ယာဉ်မောင်းပေးပို့စနစ်များစနစ် Metrobus လိုင်းအတွက်စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်ချေ။
ကို Safe ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပေးပို့စနစ်များစနစ်နှင့်အတူပုံရိပ်ကိုအနက်ကိုနည်းပညာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ device ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုမော်တော်ယာဉ်ထဲမှာထည့်ထားလိမ့်မည်။ ဤစက်ကိရိယာမှတဆင့်အသွားအလာအတွက်တ္ထု, အမောင်း 80 မီတာဖော်ထုတ်မယ်နေဖြင့်သတိပေးပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားသတိပေးချက်အမြင်အာရုံနှင့်အကွားနိုငျနှစ်ဦးစလုံးမောင်းသူမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏နိုင်ပါသည်။ ကားမောင်းသူရဲ့ထိုင်ခုံမှစလှေတျတျောတစ်ချိန်တည်းမှာပင်မတော်တဆမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့တုန်ခါလိမ့်မယ်။
အသစ်က system ထဲကနေရရှိသောဒေတာ, ယာဉ်မောင်းကိုလည်းဒီဒေတာကိုသိမ်းထားဖို့ IETT လှုံ့ဆော်။ ထို့ကြောင့် IETT ယူနစ်ကိုချိုးဖောက်၏ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးပါလိမ့်မည်။ ဒေတာတွင်ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ရေးတွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
"ကျနော်တို့က ZERO ကို AT မတော်တဆမှုနေတာကိုလျှော့ချချင်ပါတယ်"
ဿွာန်Kadiroğlu၏ IETT သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာဌာနမှူး, မကြာမီအစ္စတန်ဘူလ်၏ဝန်ဆောင်မှုခံရမည်မည်သည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမျှဝေခဲ့သည်။ အမြင်အာရုံ, ကားမောင်းခြင်းနှင့်မီးမောင်းထိုးပြတုန်ခါနေစဉ်ယာဉ်မောင်း၏စကားသံကိုKadiroğluအဖြစ်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်, ပြင်းထန်မတော်တဆမှုပညာရေးနှင့်အတူလျော့ဖေါ်ပြခြင်းတို့သည်ဤစနစ်ဖြင့်သုညမှလျှော့ချရန်လိုကြောင်းပြောသည်။
ရာသီအညီလုံခြုံစိတ်ချရသောမောင်းနှင်မှုများအတွက် Michelin ယာရွေးချယ်မှုအကြံပြု 03 / 04 / 2014 Michelin လုံခြုံမောင်းနှင်မှုများအတွက်ရာသီပေါ် မူတည်. တာယာရွေးချယ်မှုအကြံပြု: တစ်သက်တာ Michelin ရာပူဇော်သက္ကာကိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့မိုင်အကွာအဝေး, လုံခြုံရာကိုမောင်း, အတွေ့အကြုံများ၏တာယာစက်မှုလုပ်ငန်း 125 နှစ်ပေါင်းအတူကမ္ဘာ့ဖလား, လောင်စာငွေစု, မကြာသေးမီရက်အတွင်းရာသီအလိုက်နွေရာသီအကျိုးသက်ရောက်မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများယူခြင်းဆောင်းရာသီမှာအညီကျနော်တို့ရာသီခံစားရရန်စတင်တာယာအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုသတိပေးလိုက်သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတာယာထုတ်လုပ်သူ Michelin, နွေးထွေးသောရာသီဥတုနှင့်အတူတစ်ပိုလုံခြုံမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကပေးရာသီအညီဖန်ဆင်းတာယာရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးယာဉ်မောင်းသတိပေးကြပါတယ်။ ဆောငျးရာသီနှင့်နွေဦး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမှုကာလများတွင်ယာဉ်များ၏တာယာဆုံးရှုံးဖို့စတင်လာသေး၏ဤသည်နေ့ရက်ကာလလေထုထဲတွင်ခံစားခဲ့ရခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဘေးကင်း Michelin ...
Antalya လုံခြုံမောင်းနှင်မှုနည်းစနစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ရေးမှပေးထားသောခံရဖို့စတင်ခဲ့ 19 / 06 / 2012 ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားလုပ်ငန်းရှင်များ '' ကို Safe ယာဉ်မောင်းနည်းပညာသင်တန်း '' နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် Antalya ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက် Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားစနစ်များဦးစီးဌာနအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းအားပေးနေပါတယ်။ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏ရထားစနစ်များဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်း၌အုပ်စုများအတွက်တက်ရောက်ခြင်း, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုဖို့သူအပေါငျးတို့သ drivers တွေကိုကျင်းပခဲ့တယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံယာဉ်မောင်းမြို့ကြီးတွေမှာအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုရန်ယာဉ်မောင်း, မိုးသည်းထန်စွာကုန်စည်ယာဉ်များနှင့်အတူ Coates မြေနှင့် Murat Pazvantlıကပေးတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအတွက်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်နည်းစနစ်, ရာသီဥတုနှင့်လမ်းအခြေအနေများကားမောင်းမော်တော်ယာဉ်, လိုက်နာမှု၏အသုံးပြုမှုကိုကနေရရှိလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင် ...
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Karaman ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများရွှေ့ပြောင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့ကဆိုပါတယ် 12 / 10 / 2012 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးSüleyman Karaman ၏သမ္မတနိုင်ငံ "နေရာတိုင်း 600 အတွက်ခရီးစဉ်များ၏ရွှေ့ပြောင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဆိုတာသေချာဖို့, အချင်းကီလိုမီတာ," ဟု၎င်းကပြောသည်။ Karabükအတွက်စာနယ်ဇင်းသမားများမှကြေညာချက်ထဲမှာ Karaman, "1 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားစနစ်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရုံ" လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထို့ကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောရထားသို့ရောက်လာသည်ကား, သူကပြောသည်။ အကြောင်းကိုလေထုညစ်ညမ်းမှုမီးရထားဖော်ပြထားအလွန်သတိထား Karaman, "လေကောင်းလေ၏အနာဂတ်ရောင်းအားမှာတော့အခုတော့တစ်စိတ်ကူးယဉ်အခွအေနေ။ လည်းဒီအခြေအနေကရထားလမ်းကိုအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ လေထုညစျညူးသောနိုင်ငံများတွင်သန့်ရှင်းသောလေထုကိုအတူနိုင်ငံများသို့ပိုက်ဆံပေးချေမည်အကြောင်း, ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုကြောင်းသူကပြောသည်။ တူရကီ၌ပြစ်မှားမိလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ ...
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Karaman ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများရွှေ့ပြောင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့ကဆိုပါတယ်
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman: ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားရွှေ့ပြောင်းတားဆီးလိမ့်မည်ဟု
အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ level crossing များကို
အဆိုပါခရီးသည်ရထားကိုရှောင်ရှားဖို့ကျေးလက်ကနေ Kayseri ရွှေ့ပြောင်း